BBC Somali - Cayaaraha - Arsenal V Fulham
4 December, 2010, 12:49 GMT 15:49 SGA
Cayaarta maanta ay BBC-du idiin soo gudbinayso waxay dhexmaraysaa Arsenal iyo Fulham, waxaana lagu cayaarayaa garoonka Emirates ee waqooyiga magaalada London.
Dhinaca Arsenal Samir Nasri iyo Sebatien Squillaci labaduba waxay ka soo kaceen dhaawacyo fudud oo jilibka ka gaaray.
Waxaa kaloo dhaawac ku maqnaanaya goolhaye Manuel Almunia iyo kabtanka Cesc Fabregas, waxaa kaloo dhaawac ah Frimpong iyo Vermaelen.
Dhinaca Fulham, waxaa ka maqnaanaya difaaca Carlos Salcido dhaawac dartii, sidoo kale waxaan u cayaaraynin Dembele, Halliche, Senderos, Stoor iyo Zamora, oo iyaguna dhaawacyo kala duwan qaba.
Kooxda Arsenal laba cayaarood oo gurigooda ay ku yeesheen tartankan ayaa laga badiyay, inkastoo sida guud cayaaraha ay ku yeeshaan garoonka Emirates ay ku adkaadaan, waxaana ay ku dadaalaysaa in cayaartii sadexaad oo xiriir ah aan maanta gurigeeda looga adkaan.
Arsenal waxay ku jirtaa booska 3-aad inkastoo ay isku dhibco yihiin Chelsea oo kooxda labaad liiska kaga jirta oo labaduba ay leeyihiin min 29 dhibcood, balse Chelsea ayaa ka gooldhalin badnayd Arsenal, waxaana koowaad ku jirta Manchester United.
Kooxda Fulham, ayaase ah kooxda kaalinta 17-aad ku jirta 15 dhibcood.
Natiijooyinka horyaalka Ingiriiska Sabtidan
Balotelli oo kusii jeeda Liverpool
Reer Galbeedka oo Ruushka cambaareeyay